Tababar Loo qabtay Hogaaminta Hoose Ee X.D.SH.S.I-Degmada Awaare - Cakaara News
Tababar Loo qabtay Hogaaminta Hoose Ee X.D.SH.S.I-Degmada Awaare
Jigjig(CN) Khamiis, 13ka August 2015, X.D.SH.S.I waxa uu leeyahay barnaamijyo iyo istaraatijiyado siyaasado horumarineed oo ku salaysan ka jawaabida baahida shacabka, kor u qaadida iyo xoojinta koboca dhaqaalaha tirtirida saboolnimada karaar galinta iyo dadajinta adeegyada aas aasiga ah ee bulshada.
Isagoo xisbigu ahmiyada siinaya fulinta qorshayaashaas udajisan ayuu tababaro lagu xoojinayo awooda fulinta iyo kor uqaadida garaadka siyaasadeed siiyaa heerarka kaladuwan ee hogaaminta had iyo jeer.
Hadaba sida uu noo sheegay wariyaha cakaara ee gobolka jarar, waxaa saaka kabilawday degmada Awaare ee gobolka jarar tababarka hogaaminta hoose ee maamulada tuulooyinka iyo tuulo hoosaadyada hoos yimaada degmada. waxaana furitaankii tababarkan kahadlay gudoomiyaha degmada Awaare mudane Cabdi wahaab Maxamed Shugri oo sharaxaad kooban kabixiyey ujeedada iyo ahmiyada tababarkani leeyahay una sheegay tababartayaasha in mudada uu socdo tababarkani si qoto dheer loogu gorfayn doono fahan buuxana laga siin doono hogaaminta hoose cashiro ay ka mid yihiin: Sooyaalka taariikheed ee XDSHSI iyo bulshdada DDSI soo mareen, jihooyinka siyaasadeed ee XDSHSI, geedi socodka dib u curashada, jihooyinka guud ee dib u curashada dalkeena itoobiya, jawiga dib u curashada iyo doorka hogaaminta iyo waliba fahanka nidaamka federalisamka. wuxuuna hadalkiisii kusoo koobay in hogaaminta hoose looga baahan yahay inay dhegta uraariciyaan casharada labixinayo muujiyaana anshax wanaagsan oo ay ilaaliyaan wakhtiga.
Ugu danbayntiina waxay tababartayaashu sheegeen in tababarkani yahay mid ay ubaahnaayeen muhiimad wayna uleh. oo ay kafaaiidaysan doonaan. wax wayna kabadali doona garaadkooda iyo qaab fulintoodi horaba, dardargalina doona shaqooyinka uyaala.